Matte Black Centerset Qolka Musqusha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Centerset Furaha qasabadu Musqusha / WOWOW Matte Black Bamka Qolka Musqusha 4 Xarumood Inch
Naqshadeynta casriga ah: Dusha madow ee matte, iyo khadadka fudud. Wax shiil ah malaha Cadaadis weyn oo aad u casri ah oo jilicsan.
Qasabadda musqusha oo leh 2 gacmood: 4 inch centerset, fududahay in lagu rakibo 3 godad; naqshadeynta caadiga ah oo leh qulqulka usha wiishka.
Dhisme culus: Lagu dhisay kartuun dhoobo ah oo daboolan, si habsami leh ayuu u wareegayaa si loo hubiyo isticmaalka muddada-dheer iyada oo aan biyo tifqin.
Nozzle Tayada SareBadbaadso biyaha oo si tartiib ah ayaad u taaban kartaa faraha si aad uga saarto miisaanka iyo kalsiyumka. Diirimaad iyo qabow laba gacan ayaa naqshadeeyay, si sax ah u xakameyn heerkulka biyaha.
Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Waxaan xallin doonaa dhibaatadaada sida ugu dhakhsaha badan.
4 Inji Qasbada Qubayska Madaw ee Xarunta
WOWOW Musqusha qasabada musqusha xaruunta madow 2321200B alaab si taxaddar leh loo xushay, qalab qaro weyn, xariifnimo, wax soo saar sax ah, qiimo buuxda oo lacag ah. dhammaan baakadaha waxaa lagu diraa UPS ama adeegyada dhaqaalaha ama heerka caadiga ah ee USPS, oo leh dammaanad saddex sano ah, laguna baaraandegayo 1 maalin shaqo gudahood si loo hubiyo in si dhakhso ah wax loo gaadhsiiyo!
2 Qaboojiye Qubeyska Musqusha: naqshad 2 gacan qabsi ah oo loogu talagalay xakamaynta biyaha & heerkulka saxda ah, cabbirka 4-inji ah iyo 3-dalool oo ku habboon inta badan saxannada iyo saxanka biyaha; Ku qalabaysan Lift Rod Drain Assembly; Khadadka Alaabada Kala Iibsiga
2 HANDLES FAUCET BATHROOM: Diirimaad iyo biyo qabow: Xaraash-ka Caymiska Bilaashka ah, Ka samaysan xirmada dhoobada sare ee sibidhka, ayaa si fiican ugu wareegeysa si loo hubiyo isticmaalka muddada-dheer iyada oo aan daadineynin biyo iyo daadis, iyo in si sax ah loo xakameeyo heerkulka biyaha.
Tayada iyo Qalabka: Xirmada sare ee xirmada shahaadada leh ee NSF-ka shaabadaysan waa mid aan dhib lahayn oo aan lahayn macdanta "lead", heerka biyaha ayaa la dammaanad qaaday; Maaddada: zinc alloy / bir aan bir / bir lahayn
BASIN FAUCET SIYAASADDA SARAAR: ABS-kooda ABS wuxuu badbaadiyaa 50% biyo iyo ka hortaga buufiska. Xirmooyinka dhoobada dhoobada ah ee waallida ahi way waaraysaa. Tuubbo tayo sare leh oo lugta naxaas ah leh, birta aan fiicnayn ee birta ka sameysan, cimri dhejis.
XAQIIQADA BADBAADADA ee leh 3 SANO SAMEE AH: Fadlan xor baad u tahay inaad nala soo xiriirto haddii aad wax su'aalo ah qabto. Waxaan xallin doonnaa dhibaatadaada sida ugu dhaqsaha badan.
SKU: 2321200B Categories: Centerset Furaha qasabadu Musqusha, Qubeyska Musqusha Tags: 2 Qabashada, Xararka 3, Black
Naxaas Nuuradaysan / Madow
Zinc alloy / ahama bir